कांग्रेसलाई घरभित्रै करौंती
आफ्नैले साथ दिन्नन् भन्ने बुझेको भए गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सायद यस्तो प्रस्ताव तयार पार्ने थिएनन् होला । आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई लाभ पुग्नेगरी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको ६ वर्षपछि उम्मेद्वार हुन पाउने प्रस्ताव बनाएका थिए । निर्वाचन कसुर तथा सजायँ ऐनमा उनले ल्याएको यस्तो प्रस्ताव कांग्रेस नै लागेर ध्वस्त बनाइएको छ । निधिलाई जिल्याउनेगरी भ्रष्टाचार मात्रै होइन, कर्तव्य ज्यानमा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएकाले पनि… विस्तृत समाचार
चुनाव जित्न चुनावको ‘च च’
जेठमा स्थानीय चुनाव गर्नेगरी तयारी थाल्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । तर, अवस्था यही रहे चुनाव पत्राचारमै सीमित रहने पक्का छ । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा छ । संयोजक आनन्द ढुंगाना बिरामी छन् । थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने र दलहरुले राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान लिनेनलिने भन्ने विवाद मिल्न सकेको छैन । र, यो कानून बिना चुनाव सम्भव छैन । अझ,… विस्तृत समाचार
‘र’ प्रमुखको रात्रिभोज
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का प्रमुख एके धंसनाले नियुक्त भएको महिना दिन नबित्दै नेपालका समकक्षी दिलीप रेग्मीको टोलीलाई दिल्ली बोलाएर डिनर खुवाएका छन् । डिआइजी यदु खरेल र कर्मचारी राजेन्द्र साप्कोटासहित एक दिने यात्रामा गतहप्ता दिल्ली पुगेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख रेग्मीसँग धंसनाले पौने घण्टा आतंकवादी गतिविधिबारे कुराकानी गरेको सूत्रको दाबी छ । यो यात्राको आतेजाते खर्च भने नेपाल सरकारले व्यहोरेको हो । यसबीच, नेपाल… विस्तृत समाचार
राजधानीमा देखियो नयाँ रोग
काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ रोग देखिएको छ । यो कस्तो रोग भने कुनै व्यक्तिले एक दिनभन्दा बढी जग्गा राख्दै नराख्ने, बेचिहाल्ने । आज किन्यो भोलि बेच्यो । तर, चुरो कुरो भने बेग्लै रहेछ । यी सब काम कागजमा मात्रै हुने । त्यो पनि बिक्री मूल्यमा रु. ३० लाखमात्रै देखाएर । उपत्यकाका सात मालमोत कार्यालयमार्फत् साउनदेखि यता लगभग १०० वटा यस्ता कारोबार भएको स्रोत बताउँछ । जसले… विस्तृत समाचार
पारिबाट यस्तो पो आयो प्रस्ताव
भारतीय गुप्तचर निकायले नेपालका सुरक्षा निकायलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न विभिन्न कोशिश गरेको पाइएको छ । केही समयअघि विशेष अफर लिएर पश्चिम बंगालबाट भारतीय सेनाका दुई अधिकारी काँकडभिट्टा आएका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय छिरेका तिनले त्यहाँका इञ्चार्ज डिएसपी दुर्गाराज रेग्मीसँग गोप्य भेट गरे । सरुवा भएर आएको लामो समय नभएकाले सीमा क्षेत्रका सबै कुराको भेउसमेत पाइनसकेका रेग्मीसँग चिनजान र गफगाफ भयो । हिन्दी भाषामा पोख्त… विस्तृत समाचार
दलाल को हो यो देश चलाउने ?
यी सबै तथ्य गहिरिएर अध्ययन गर्दा भन्न करै लाग्छ, हाम्रो देश कुनै नेताले होइन, अमुक दलालको इशारामा चलिरहेको छ । ओली सरकारको पालामा सञ्चार क्षेत्रमा धेरै राष्ट्रवादी निर्णय भए तर ती किन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ? जस्तोः क्लिन फिड, सेक्युरिटी प्रेस, आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट), नेपालको आफ्नै ब्याण्डविथ इन्टरनेट सबैलाई कुन रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो ? ०४९ सालको आठौं पञ्चवर्षीय बजेट भाषणदेखि सुरक्षा छापाखानाको कुरा उठाइएको हो… विस्तृत समाचार
एउटा एजेण्डामा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकले अर्कै निर्णय गर्ने क्रममा चुनावबाट तर्किन प्रचण्डले अनेकन उपाय निकालेजस्तै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायपरिषद्लाई निर्णयहीन बनाउन नमिल्ने अडान लिएकी छन् । सोमबार कुमार चुडाल र डा.कूलरत्न भुर्तेललाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरिएको न्यायपरिषद् बैठकको पहिलो र मुख्य एजेण्डा थियो, संवैधानिक इजलाश गठन । संविधानमै सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्येबाट पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाश हुने उल्लेख छ । न्यायाधीश अभावका… विस्तृत समाचार
कुरा मात्रै ठूला गरेर हुने के ?
डा. भीम आचार्यको नाम काटेर डा. राजेन्द्र पन्तलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक बनाइएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीलाई खुशी पारेर बाल स्वास्थ्य महाशाखा छिरेका पन्तले यो पटक रामै्र मिहिनेत गरेको स्रोत बताउँछ । कुरा नमिल्दा बालस्वास्थ्य महाशाखा र व्यवस्थापन महाशाखामा क्रमशः डा. विकास लामिछाने र डा. विकास देवकोटाको नाम उठे पनि हालसम्म सदर भएको छैन । थापाले जति नाराबाजी गरे पनि अस्पताल र… विस्तृत समाचार
कमरेडको हातमा कुकुर ?
कतै तपाईंले बाटोघाटोमा माले नेता सीपी मैनालीसँग भेट्नुभयो भने सोध्नुहोला, ‘कमरेडको दुबै हातमा केको चोट लागेको होला ?’ जवाफ पाउनुहुनेछ, ‘घरमै पालेको कुकुरले यस्तो ग¥यो...!’ तर, कुरा किन नपत्याउनुस् भने, यो घरमा पालिएको कुकुरले उनलाई छोएको पनि छैन । कुरा अर्कै छ । उनको पार्टीबाट भूमिसुधार मन्त्री बनाइएका डम्बर श्रेष्ठले चितवन सौराहाकी पार्वती कुमाललाई सांसदमात्र बनाएनन्, श्रीमान्सँग भेटघाट नहुने गरी आफूसँगै राखे । उनी मन्त्री… विस्तृत समाचार
मात्र एउटा मान्छेको खातिर
सरकारले घोषणै गरेको छ संघीयता कार्यान्वयन नहुञ्जेल कहिँ–कतै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी अह्रन–खटन नगर्नु । तर, सरकारी घोषणाविपरित मन्त्रालयभित्रै दरबन्दी सिर्जना भएको छ । त्यो पनि कुनै ठूलो खड्गो टार्नलाई होइन, एउटा मान्छे पोस्नका लागि । भूमिसुधार मन्त्रालयले नापी विभागमा सहसचिव रहने गरी एउटा अलग्गै दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । हेरिनसक्नुका सहसचिव थुप्रिएर, काम नपाएर बसेका छन् । तर, दरबन्दी सिर्जना गर्दै भूमिसुधारले के… विस्तृत समाचार
‹ First Newer 60 61 62 63 64 Older Last ›